David Alaba oo si cad u sheegay Kooxda uu ka taageero Premier League & Xiddiga uu ugu jecel yahay – Gool FM
Dajiye February 16, 2020
(Munich) 16 Feb 2020. Daafaca bidix ee reer Austria iyo kooxda Bayern Munich ee David Alaba ayaa si maldahan u sheegay inuusan meesha ka saari doonin ku biiritaanka mid ka mid ah kooxaha horyaalka Premier League.
David Alaba ayaa si cad u sheegay inuu daawada horyaalka Premier League iyo jaceylka uu qabo kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Arsenal.
27 jirkan ayaa ku biiray kooxda Bayern Munich xagaagii 2008, xilligaas oo ay da’adiisu aheyd kaliya 18 jir, wuxuuna ka qeybgalay 350 kulan ilaa iyo haatan oo kooxda Bayern Munich ah.
Qandaraaska David Alaba ee kooxda Bayern Munich ayaa dhamaan doona xagaaga 2021, sidaas darteed ciyaaryahanka ayaa haatan si dhab ah uga fiirsanaya suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqi karo koox kale ee cusub oo meel kale ah.
Haddaba wargeyska “Times” ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay David Alaba waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ku biirista horyaalka Premier League si aad uga ciyaarto? waan arki doonaa waxa dhaca mustaqbalka”.
“Si fiican ayaan u aqaanaa Premier League, waxaan daawanayay tan iyo markii aan yaraa, waxaan ka taageeraa kooxda Arsenal iyo Patrick Vieira waa mid ka mid ah xiddigaha aan jeclahay”.
“Waqti xaadirkan, kama fikiro wax badan, laakiin waxaan qiyaasayaa inaan ka ciyaari karo meel kale”.
"Wuxuu cabi jiray KHAMRIGA iyo DAROOGADA isagoona iska diiday Kubbada Cagta iyo Iskuulka." – QISO ku saabsan saxiixa cusub ee Chelsea Hakim Ziyech